ဘလော့ကိုအလွယ်ဆုံးပြုပြင်နည်း( အသစ်များအတွက်အထူး) ~ ဘလော့ခရီးသည်
မင်္ဂလာပါနော်...ခု တင်ပေးတဲ့ နည်းပညာလေးကတော့ဘလော့ကာ လုပ်စ သူငယ်ချင်းများအတွက် အထူး
ရည်ရွယ်လိုက်တာပါ... ဘလော့လေးတစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး ဘယ်လို အလန်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင် ဖန်တီးနိုင်မယ် ဆိုတဲ့ နည်းပညာလေးပါဘဲ.... လွယ်ကူပေမယ့် စလုပ်ခါစ သူတွေအတွက်တော့...
ပထမဆုံး ဘလော့လေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီပေါ့နော်.. အဲမှာ... ဘယ်ကနေ စလို့ ဘယ်လို ဖန်တီးကြမယ်ဆိုတာပေါ့ါ...စမယ်နော်...
အဆင့် (၁) အနေနဲ့....စမယ်နော်
ရွေးချယ်ဖို့ပါဘဲ... အပေါ်ပုံပြထားတဲ့ Simple ဆိုတဲ့ အမည် အောက်မှာ သူ့ရဲ့ တက်ပလက် ပုံစံကို တွေ့
ရပါမယ်... အလားးတူဘဲ..အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ရင် အများကြီးးရှိပါတယ်... ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ်...
ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး ဒီဇိုင်းကတော့ နံပါတ် (4) Awesome Inc. ကိုပါ... သူကဆိုဒ်ဘား ပို့စ်ဘော်ဒီတွေကို လှပသေသပ်စွာ ဘောင်လေးတွေ ခတ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. များသောအားဖြင့်တော့
ဘလော့ကာတော်တော်များများက လာလာပြီးမေးတတ်ကြတဲ့ပြဿနာက တက်ပလက်ကို ဘောင်လေး ဇယားလေးတွေနဲ့ လုပ်ခြင်လို့ပါဆိုတဲ့ ပြဿနာကိုပါဘဲ... ဒါဆို (4) Awesome Inc.ကိုရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါပြီ...နော် ကဲဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။
အဆင့် (၁) အနေနဲ့ အပေါ်ကပြထားသလို ကလစ်ပြီး template ဆိုတာကို သွားလိုက်ပါနော်...
အဆင့် (၂) အနေနဲ့ အပေါ်ပုံ ကျလာပြီ ဆိုတဲံအခါ မှာ... Customise ဆိုတာကိုကလစ်ပေး
လိုက်ပါ... အဲနေရာမှာ ဘဲ မိမိစိတ်ကြိုက် တက်ပလက် တွေကို ရွေးးမယ်ဆိုလဲ ရွေးချယ်နှိုင်ပါတယ်နော်.
အဆင့် (၃) အနေနဲ့ ကေတာ့.. အပေါ်ပုံကို က်ြည့လိုက်ပါ.. ဘေးက layout ဆိုတာကလစ်ပြီး
မိမိတို့ ဆိုဒ်အတွက် ဆိုဒ်ဘားး ပုံစံ ဒီဇိုင်းတွေ ရွေးချယ်လိုက်ပါ ဘယ်ညာ ထားးမလားးး
ညာတစ်ခု ဘဲလားးးး... ဆိုတာ ရွေးပေးပေါ့.... လိုခြင်တာ ကို စိတ်ကြိုက် ရွေးးပြီး Apply to Blogs ကို
အဆင့် (၄) အနေနဲ့ အပေါ်ပုံကို က်ြည့လိုက်ပါ... မိမိတို့ တက်ပလက်ကို ကျယ် နိုင် ကျဉ်းနိုင်တဲ့
နေရာလေးပေါ့... ဘေးက အနီပြထားတဲံ Adjust widths ဆိုတာကိုကလစ်ပြီး လိုအပ်သလို
အဆင့် (၅) အနေနဲ့... ကတော့ နောက်ဆုံးးလုပ်ဆောင်ချက် အရ... မိမိတို့ ဘလောလေ့း လှပသေသပ်ဖို့ ကာလာတွေ ချိန်ကြမယ်.... စာလုံးးဆိုဒ် အရွယ်အစားတွေ ပြောင်းကြမယ် ပေါ့
ဘေးမှာ အနီပြထားးတယ် အဲကနေ တစ်ခုချင်းဆီ ကလစ်ပြီး ပြင်ပေးလိုက်ပါ. သည်နေရာ ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာက ဘေးက Advanced ဆိုတာကလစ်ပြီး သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်....နော်..
သည်နေရာရောက်တာနဲ့ ဘလော့လေးး လှပသေသပ်ဖို့ ကြိုက်သလို ကလိပေတော့ဗျာ....
ခေါင်းစဉ်ကာလာ တွေ... ဆိုဒ်ဘားကာလာတွေ လင့်ကာလာတွေ အမျိုးမျိုး ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်....နော်..ဘလော့ စတင် ဖွင့်နည်းကိုတော့ စာအုပ်တွေ ရော အရင်ကလည်းတင်ခဲ့ဘူးးလို့ သည် နည်းလေးကတော့ အလွယ်ကူဆုံး ဘလော့လေးကို ပြုပြင်နည်း
တကယ်လို့ မရှင်းးတာ မသိတာရှိခဲ့ ရင် cbox မှာ အော်ခဲ့နိုင်ပါတယ်... ကဲ အားးလုံးအဆင်ပြေပါပြီနော်..နောက်ထပ် လိုအပ်ချက် ရှိတဲ့ နည်းပညာတွေကိုလဲ ထပ်မံ တင်ပေးးသွားးပါ့မယ်.... နောင်အမြဲ ဘလော့ပညာဆိုင်ရာတွေကို .. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်...။ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက...cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်..
Posted in: Blogger Template, New Blogs
ကျေးဇူပဲ အကိုရေ ပထမကျန်နော် တင်ထာတဲ့ ဘလော့ဟာ ရုပ်ဆိုးနေတာ အခုအကိုရေးပြလိုက်မှပဲဘလော့ဟာလှပသွားတောတယ် thank ပါ
28 August 2014 at 05:35
ဘလော့မှာ ဂွင်ခတ်လို့မရဖြစ်နေလို့ကူညီပါအုံး PostaComment